Tsy nanana toerana natokana ho an'ny studio ho firaketana izahay, nipetraka teo ambony latabatra lavitra ny vahoaka fotsiny izahay… fa tsy nanampy mihitsy. Raha nanana ny mixer-ko sy ny mikrôfô studio aho dia azoko natao ny nandanjalanja ny tany ambadika tany fa ireny mics lavalier ireny dia naka ny feo kely rehetra! Torotoro aho.
Noho izany, nanao fanandramana niaraka tamin'ny fitaovan'ny Audacity izahay tamin'ny fanesorana ireo feo ambadika saingy raha nanova ny toe-javatra izahay dia nanomboka nanako ny feo. Nalefako tao amin'ny forum podcast tiako indrindra sy ilay namako mahatalanjona io olana io. Jen Edds atolotra avy hatrany Izotope RX6, fitaovana mitokana amin'ny fanamboarana ireo rakitra audio.
Raha heverinao fa mahavita an'ity aho… dia nandroso aho ary nizara sombin-valiny. Tena manaitra tokoa! Fanamarihana - Tsy nitantara an'io tao amin'ny studio-ko aho, nampiasa mic desktop fotsiny tao Garageband aho… koa aza mitsara ahy.
Tags: tabataba ao ambadikade-tabatabaizotopeizotope rxizotope rx6esory ny tabataba ao ambadikaesory ny tabataba